विप्लव प्रहरीको हिट लिस्टमा
काठमाडौं, २० मंसिर - प्रहरीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव आफ्नो हिट लिस्टमा रहेको बताएको छ । प्रहरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर विप्लवको खोजी भइरहेको बताएको छ । उनलाई तत्कालै पक्राउ गरिने प्रहरीले जनाएको छ । देशभरबाट उनका ६०० भन्दा बढी कार्यकर्ता पक्राउ गरिएको समेत प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ कुन पार्टीमा उम्मेदारले कति मत ल्याए ? (मतपरिणाम हेर्नुहोस्)
यी ६ प्रदेशमा गठबन्धनको दुईतिहाइ (विजयी दलको सूचीसहित)
समानुपातिकतर्फ एमालेको अग्रता कायमै, पछ्याउँदै कांग्रेस
आजका पत्रिकाका मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित समाचार
अमेरिकाले नेट न्युट्रालिटीलाई खारेज ग–यो, अब के हुन्छ ? काठमाडौं, २९ मंसिर — अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासनको निर्णयलाई पल्टाउँदै नेट न्युट्रालिटीलाई खारेज गरेको छ । यो कानूनको विरोध गर्दै अमेरिकाका नियामकहरू...
यिनीहरू हुन् संसारका सबभन्दा अल्छी मानिस (फोटो फीचर)